बेलायतसँग एक–एक हिसाब माग्दैछौं–राई – Gurkha Army Ex-Servicemen's Organisation GAESO
You Are Here: Home » अन्तर्वार्ता » बेलायतसँग एक–एक हिसाब माग्दैछौं–राई
भुपु ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका हक अधिकार सुरक्षित गर्दै समानता माग्न वि. सं. २०४७ सालमा विधिवत रुपमा भुपु गोर्खा सैनिक संघ गेसोको स्थापना भयो । त्यतिबेला कसैले पत्याएका थिएनन् गेसोले यति ठूलो बिजय हासिल गर्ला भनेर । त्यतिबेला बन्दुकको लडाई गर्ने भुपु गोर्खा सैनिकले बेलायतका विरुद्ध कानुनी लडाई लड्न सक्छन भनेर कसले पत्याउने । तर, पनि गेसोका केही व्यक्तिहरु निरन्तर लागिरहे । उनीहरुले कसैका कुरा सुनेनन् । आफ्नो योजनाका साथ अघि बढिरहे । त्यस मध्येका एक सहयोद्धा हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण कुमार राई । हाल गेसोका केन्द्रिय उपाध्यक्ष रहनु भएका राई निरन्तर गेसो आन्दोलनमा लागि रहनु भएको छ ।
ब्रिटीस आर्मीबाट रिटायर्ड भइसकेपछि फेरी सेकेण्ड करियर सुरुवात गर्न सेक्युरेटी गार्डका लागि बु्रनाई जान अन्ति तयारी गर्नु भएका राईका लागि एक दिन यस्तो समय आयो । जुन दिन गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङसँग भेट भयो । सभापति गुरुङका कुरा सुनेपछि उहाँ बु्रनाई जान छाडेर गेसो आन्दोलनमा होमिनु भयो । आन्दोलनमा होमिएपछि उहाँ अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहनु भएको छ । गेसोलाई यहाँसम्म ल्याउनमा ठूलो योगदान दिनु भएका राईसँग पोखरासमाचार डटकमले गेसोको नयाँ कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर गरेको सक्षिप्त कुराकानी ।
गेसो आन्दोलन सिथिल भएको हो ?
बेलायती उच्च अदालतले गोर्खा सैनिकको पक्षमा गरेको फैसलापछि एकप्रकारले हाम्रो आन्दोलन सिथिल भएको अवस्था हो । त्यतिबेला हामीले बेलायतसँग जित्ने सबै प्रकारका अधिकारहरु जितिसकेका थियौं । अदालतले गोर्खा सैनिकहरुलाई कमनवेल्थ कन्ट्रिको सुविधा दिने घोषणा गरेपछि सबै अधिकार प्राप्त भएका थिए । त्यसपछि हामी कसरी अगाडी बढ्ने अबको बाटो के भन्ने विषयमा आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै थियौं । गेसो आन्दोलना सिथिल भएको चाँही हैन ।
उसो भए अब के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
हामी अब नयाँ कार्यक्रमका साथ अघि बढेका छौं । बेलायतले हामीलाई सिध्याउन सबै किसीमका षडयन्त्र गरे पनि सकेन । त्यसको शिकार बनाईए भुपु गोर्खा सैनिक एवं हाल बेलायती दुतावासका कर्मचारी टिकेन्द्रदल देवान । उनलाई बेलायतले पेन्सनको मुद्धा हाल्न लगाएर हराएको नाटक ग-यो । अनि गोर्खाहरुले पेन्सनको मुद्धा हा-यो भनेर प्रचारबाजी गर्न पछि परेन । तर, हामीले अदालतबाटै बेलायतलाई हराउन सफm भयौं । उसले गेसोलाई हराउन अनेक षडयन्त्र ग-यो तैपनी सकेन । केही सिप नलागेपछि उसले अहिले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक ब्रिटिस फोर्स अन्र्तगतको हैन भन्दैछ । हामी यसको उत्तर खोज्दैछौं । गोर्खा सैनिक ब्रिटिस फोर्स अन्र्तगतको हैन भने कुन अन्र्तगत पर्छ । बेलायतले यसको जबाफ सारा गोर्खा सैनिकलाई मात्र हैन विश्वसलाई दिनुपर्छ ।
त्यसो भए बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई के मानेको छ त ?
हो हामी यही प्रश्नको उत्तर अब बेलायतसँग माग्दैछौं । उसले गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिस फोर्स अन्र्तगत मान्दैन भने कुन कानुनका आधारमा गोर्खा सैनिकलाई विश्वका विभिन्न देशमा लडाईयो त ? यसको खोजीनिति अब गेसोले गर्नेछ । उसले त गोर्खा सैनिकलाई भाडाको सिपाही सरह मानेको छ । ठिक छ हामी भाडाकै सिपाही हामै भने पनि हाम्रो भाडा कति हो ? यसको उत्तर त हामीलाइ ताहिन्छ । नी । भाडाको सैनिक हैन भने विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकलाई हरेक लडाईमा फ्रन्टलाईनमा लगाएर किन लडाईस् ? यसको क्षतिपूर्ति बेलायतले तिर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्दैछौं । त्यो बाहेक हामीले अर्को नयाँ कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौं । त्यो हो विश्वयुद्धमा लडाईमा मृत्यु भएका गोर्खा सैनिकहरुको सामूहिक स्मारक बनाउने । त्यसका लागि हामीले स्याङ्जाको साल्मीडाँडामा जग्गा पनि पाईसकेका छौं । त्यहाँ विश्वयुद्धताका बेलायती साम्राज्य जोगाउन गोरा सैनिकसँगै लड्दा मृत्यु भएका गोर्खा सैनिकको सम्झनामा गोर्खा स्मारक वा समाधि स्थल निर्माण गर्दैछौं । स्मारक निर्माणका लागि गेसोको एक टोलीले साल्मी डाँडामा पुगेर स्थलगत अध्ययन समेत गरि सकेको छ । यसले बेलायतको टाउको त दुख्छ नै सारा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।
किन स्मारक बनाउन जरुरी ठान्नुभो ?
बेलायती साम्राज्य जोगाउन ६० हजारभन्दा बढी हाम्रा बाबु बाजे गोर्खा सैनिकले विश्वका विभिन्न लडाईमा परेर ज्यान गुमाएका छन् । त्यसको सम्मान बेलायतले गर्नुपर्ने हो । तर बेलायतले उनीहरु कुन ठाउँमा कुन लडाईमा कहिले को को भने मरे भनेर परिवारलाई जानकारी नै दिएको छैन । सम्मान अनि क्षतिपूर्तिको कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो । ती ६० हजार बढी हाम्र बाबु बाजेले गतिलो क्रिया पाएका छैनन् । त्यसैले हामीले स्मारक बनाएर उनीहरुको सामूहिक रुपमा क्रियाकाज गर्नेछौं । त्यसका लागि साल्मी डाँडामा विश्वयुद्धका बेला मरेका विभिन्न जातिका पूराना शैलिका घरहरु निर्माण गरिनेछ । मुख्य गरि त्यहाँ विश्वयुद्धमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएका मगर, गुरुङ, लिम्बु, राई, तामाङ, क्षेत्रीका पूराना शैलिका घर निर्माण गरिने र उनीहरुको नाममा उनीहरुकै सँस्कार अनुसार श्रद्धाञ्जली तथा काजक्रिया कार्यक्रम गर्छौं ।
ठूलो लागतमा स्मारक बनाउने कुरा गर्नु भो कसरी सम्पन्न गर्ने योजना छ ?
वास्तवमा दोस्रो विश्वयुद्धताका लडाई गर्दा मरेका गोर्खा सैनिकहरुको सम्मानमा बेलायतले यो काम गर्नुपर्ने हो । बेलायतले नगरे पनि विश्वभर गोर्खाको नाम भजाउने नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो तर कसैले गरेनन् । त्यही भएर यो काम हामी गर्दैछौं । हामीले यसका लागि एक पैसा बेलायत र नेपाल सरकारसँग नमागेरै सम्पन्न गर्दैछौं । गोर्खा स्मारक बनाउनका लागि हामी सबैभन्दा पहिले भुपु गोर्खा सैनिकहरुसँग हात फिजाउँछौं । त्यसपछि गोर्खा समुदायालाई माया गर्ने बेलायती जनासँग पनि हामी सहयोगको लागि आग्रह गर्छौं । त्यो बाहेक गोर्खा समुदायप्रति सद्भाव राख्ने विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुसँग पनि सहयोग मागेर हामी यो काम सम्पन्न गर्नेछौं ।
स्मारक बनाएर वास्तवमा के गर्न खोज्नु भएको नी ?
सर्वप्रथम त विश्वयुद्धताका मरेका हाम्रा बाबु बाजेले गतिलो क्रिया पाउनेछन् । हामीले हाम्रो पृतिको लागि यो काम गर्दैर्छौ । त्यसपछि बेलायतले आफ्ना राष्ट्र सेवकलाई गरेको अपमानको बारेका विश्वलाई जानकारी गराउने काम हुनेछ । स्मारक बनाएपछि हामी बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन गर्न बोलाउनेछौं । नेपालका इतिहासमा अहिलेसम्म बहालवाला बेलायती प्रधानमन्त्री आएको रेकर्ड छैन । तर हामी बोलाउँछौं । आए ठिक छ आएन भने हामी बेलायतको धज्जी उडाईदिनेछौं । तपाईले पनि थाहा पाउनु भो हामीले गोर्खा स्मारक बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको केही दिनमै बेलायती रक्षा मन्त्री नेपाल आए । उनले पोखरा र स्याङ्जाको भ्रमण समेत गरे । नेपालको इतिहाँसमा ६ दिनसम्म बेलायती रक्षामन्त्री बसेको पाईदैन । तर, उनै मन्त्री यतिबेला ६ दिनसम्म बसेर गोर्खा स्मारकको बारेमा सोधीखोजी गरेको हामीले थाहा पाएका छौं । यसले बेलायतको टाउको दुखाउन सुरु गरिसकेको छ । विश्वभर विर गोर्खालीको नाम बेचेर खाने बेलायतले अब त्यसको एक एक हिसाब चुक्ता गर्नुैपर्नेछ ।
अलिकति प्रसंग बदलौं, तपाईहरुले यति ठूलो काम गर्दै हुनुहुन्छ तर, गेसोकै समानान्तर संस्था स्थपना भएकोमा केही प्रतिक्रिया छैन ?
समानान्तर संस्था खोल्नेहरु गेसोकै केही व्यक्तिहरु हुन् । बिचरा उनीहरुले समानान्तर संस्था स्थापना गरेका हैनन्, उनीहरु कसैबाट परिचालित हुन् । उनीहरु गेसो हाम्रो संस्था हो भन्दै हिडे पनि यो कुरा गलत हो । उनीहरुले गेसोको लोगो र लेटरप्याड समेत प्रयोग गरेका छन् । तर, हामी यस्ता सानातिना कुरामा अल्झदैनौं । उनीहरुको हैसियत के हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । सायद त्यही भएर होला अहिले गेसो हामी हौं भन्नेहरु चुप लागिसकेका छन् । गेसो भनेको अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाएको संस्था हो । यसले नै यति लामो समय गोर्खा सैनिकको पक्षमा आन्दोलन गरेर बेलायतलाई घुडा टेकाएको हो । यसकै अगुवाईमा भएको आन्दोलनले सारा गोर्खा सैनिकले अहिले आवासिय अधिकार पाएका छन् । गेसोले विश्वमै आफ्नो अस्तित्व बनाएको बेला यसको नाम बेचेर फाईदा लिनेहरु हुन् समानान्तर संस्था बनाउनेहरु । यो उनीहरुको कहिल्यै पूरा नहुने दिवा सपना मात्रै हो । कोठामा बसेर कसैको इसारामा काम गर्ने ती व्यक्तिहरु अहिले चुप लागिसकेका छन् । यीनले गरेको प्रोपोगाण्डाले गेसोलाई कुनै नोक्सान हुँदैन ।
हैन, समानान्तर संस्था भए पछि मान्छे झुकिदैनन ? यसलाई निराकरण गर्न के गर्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा त समानान्तर रुपमा आएको संस्थाको कुनै अस्तित्व नै छैन । तर, पनि यसले केही असर गर्न सक्ने धेरैको कुरा आए पनि हामीले बेलायतको कानुनी प्रक्रिया अनुसार उनीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा लागि सकेका छौं । उनीहरुलाई बेलायती कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति समेत तिराउनेछौं । उनीहरुले गेसोको चरित्र हत्या गर्ने काम गरेका छन् । उनीहरुलाई कुन कुन कुरामा मुद्धा लाग्छ भन्ने बारेमा हामी खोजीनिती गरिरहेका छौं । उनीहरुले गेसोको कार्यक्रममा आधारित भएर केही कार्यक्रम गरे भन्ने सुनेका छौं । उनीहरुले हाम्रो संस्थाको नाम बेचेर काम गर्नुको कुनै तुक छैन । जो जसरी गेसोको बदनाम गर्ने तरिकाले कसैबाट प्रयोग भईरहेका छन् उनीहरु एकदिन आफ्नो हैसियतमा झर्नेछन् ।
यो पनि एउटा तगारो हो, यस्ता बिर्सनै नसक्ने थुप्रै तगारा आए होला गेसो आन्दोलनको दौरानमा, गेसो यहाँसम्म आईपुग्छ भन्ने कहिल्यै सोच्नु भएको थियो ?
धन्यवाद । बडा मजाको प्रश्न गर्नुभो । सुरुमा गेसोले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँदा यहाँसम्म आइपुग्ला भन्ने त एक रत्ति पनि सोचेका थिएनौं । बेलायतका विरुद्ध लड्नेभन्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । तर, हामी आन्दोलनमा निरन्तर लागिरह्यों । त्यसैको प्रतिफल हो । अहिलेको बिजय भनेको । आन्दोलनका दौरानमा यस्ता तगारा त कति आए कति यो त केही पनि हैन । हाम्रो सभापति पदमबहादुर गुरुङलााई आतंककारीको आरोप लगाईयो । अहिले भनेर सकिदैनन् आन्दोलनमा आएका बाधा अडच्नका बारेमा । बेलायतले हामीलाई हराउन आफ्ना कर्मचारी हाम्रै जस्ता अनुहार गरेका पूर्व गोर्खा सैनिक टिकेन्द्रदल देवानलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग ग-यो । बेलायत यति धुर्त, चलाख, फटाह छ की भनि साध्यै छैन । बेलायतले जति हामीलाई रोक्न खोज्यो त्यती हामी बलियो हुँदै लागिरह्यों । सबैभन्दा ठूलो कुरा विचार हो । बिचार मर्दैन भने कोही नभए पनि एकदिन सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यही विचारको लडाई जितेका हौ हामीले । बेलायतले आज विश्वका सामु शिर झुकाउन बाध्य भएको छ । बेलायतले बेला बेला यस्तो निकृष्ट व्यववहार गरेको छ । मैले अघि पनि भने । बेलायतले आफ्नो राष्ट्र सेवक गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटि आर्म फोर्स अन्र्तगतको हैन भन्दैछ । बेलायतको उच्च अदालतले समेत गोर्खा सैनिक बेलायतको राष्ट्र सेवक भनेर फैसला गरिसकेको छ । अब भन्नुस आफ्नै अदालतले गरेको फैसला मान्दैन बेलायत । यो भन्दा निकृष्ट व्यवहार के हुन सक्छ ? गोर्खा सैनिक बेलायतको राष्ट्र सेवक हैन भने के हो त ? यसको क्षतिपूर्ति अब बेलायतले दिनुपर्छ । आफूलाई प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको ठेकेदार मान्ने बेलायतले हाम्रो नेत्तृत्वको चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको छ बेला बेलामा । उसले जुन निकृष्ट काम गरेको छ त्यसको उपज हो हाम्रो बिजय । बेलायतले गेसोका विरुद्धमा जुन षडयन्त्र गर्छ त्यसबाट सिक्दै अघि बढ्दै गरेर हामी अघि बढेका छौं । अझै बेलायतले जे षडयन्त्र गर्दै गएको यसको चर्को मुल्य तिर्नुपर्नेछ उसले ।
Bom Bahadur Gurung
Padam Sir, You are so great because………how to explaine I have no words to say. you are fighting for others not for self. Thanks to that MOM who gave birth suchabraver son who is now devoted for gurkha’s welfare